In-Guriga ama Dibad-bixinta? Lacagta Xawilaadaha ah ee Talo-bixinta Talooyin Ku Saabsan Maamulayaasha Suuqa Iibsiga
Dadka mas'uulka ka ah suuq-geynta internetka ayaa laga yaaba in ay la yaabaan habka ugu wanaagsansi ay u fuliyaan SEO for shirkad. Barashada farsamooyinka loogu talagalay DIY waxay noqon kartaa qaab habboon oo qiimo jaban ah, laakiin waxaa dhici karta in ay dhawaan la kulmaan khatarta ahkulan ama hirgelinta awoodda loo baahan yahay. Xaaladdani waxay keenaysaa baahida ay ku jiraan sadexaad ee kooxda ololahaaga SEO - abfallstelle zollikon switzerland. Theqaybta saddexaad waxay ku shaqaaleyn kartaa xirfadle uqalma inuu kaa caawiyo suuq-geynta internetka ama aad u tagto shirkad sumcad leh SEO ahdalabkii ugu wanaagsanaa ee loogu talagalay boggaaga.
Ma jiro qaab sax ah ama taabasho ah waxay damaanad qaadi karaan guusha laga gaaro goob kasta. Internet walbabaahida suuq-galka waa mid gaar ah. Qaybaha kala duwan ee suuq-geynta internetka ayaa si fiican u shaqeyn kara habka DIY halka kuwa kale ay yihiin kuwo cajiib ahmarka uu fuliyo khabiir. Xaalado kale, shirkadaha SEO oo leh sumcad waxay noqon karaan kuwo waxtar leh. Siyaabo kale oo dhacayguulaysiga waxaa ka mid ah isku-dar ah hal ama dhowr siyaabood oo leh is-beddelo kala duwan.
Ross Barber, Maareeyaha Guusha Macaamiisha Sare Adeegyada Digital, waxay soo saartey liis ku saabsan 3 talo kuwaas oo noqon kara kuwo waxtar u leh ololaha suuq-geynta ee internetka:
1. Miisaaniyadda iyo kharashyada
Waa lagama maarmaan in la saameeyo inta hawsha oo dhan ay u baahan tahay iyo in kaleguriga ama dibadda. Xilliga qiyaasta ee qiyaasta ayaa ku guuldareystey in uu keeno waqtiga iyo daalka sidoo kale. Waqtigu waa lacag, waana sidaas adigaka qaybgalka iyo welwelka..Dhaqan ahaan hadalka, dibad-bixinta waxay noqon kartaa mid qaali ah waxaana laga yaabaa inay ubaahantahay maaliyad badan marka loo eego guriga. WixiiTusaale ahaan, miisaaniyad ka yar 300 USD ma ballanqaadi karto guusha marka la baxsho. Dammaanad ku soo dallacaysa 5000 oo Dollar bil kasta / sannadkiibaQorshuhu waa lacagta ujradda ee Maraykanka. Maareynta kooxda guri ama xitaa shaqaale mushahar leh oo isku mid ah waxay u baahan karaan dheeraad ahdhaqaale.
2. Qaabka ganacsiga
Shirkad si buuxda ugu tiirsanaysa internetka loogu talagalay macaamiisha ayaa u baahan karaqaar ka mid ah tababbarrada guriga iyo talooyin ah inay ku shaqeeyaan. Tusaale ahaan, ganacsigaagu wuxuu sameyn karaa tirooyin waaweyn sida malaayiin doolar. TaniGanacsi waxay noqon kartaa aasaas muhiim ah kaas oo laga yaabo inay u baahdaan maamulaha inuu aqoon u leeyahay talooyinka SEO. Dhanka kale, shirkad kaas oo sameeyakuma xirna internetka gebi ahaanba suuq-geynta ayaa u baahan kara koox gudaha ah.
3. Helitaanka heerka aqooneed ee loo baahan yahay
Marka xulashada guriga dhexdiisa ay tahay xulashadaada, waxaa jira baahi loo qabo in wax laga bartokordhiya xirfadlahaaga. Baahida kale waxay noqon kartaa nooca shaqada ee ku habboon baahidaada SEO. Shirkad ballan qaadaysa inay samayso SEOsababtoo ah waa inaad haysataa wax soo saar shaqo oo la mid ah bartilmaameedka suuq-geynta ee internetka. Helitaanka xirfad ku habboonheerkulku waa, sidaas darteed, waa arrin lagu ogaan karo in suuq-geynta internetka lagu sameyn doono guriga ama dibadda loo-shaqeeyaha.
Dooranaya dhexdhexaadinta guriga dhexdiisa ama dibad-baasid raadintaadaHagaajinta (SEO) ama hawlaha suuq-geynta internetka waxay noqon kartaa hawl culus. Haddii ay tahay lacag-ku-riix -ka ama maareynta PPC, contentsuuq-geynta, qaabeynta webka, soo iibsiga internetka, wargeyska caanka ah, suuq-geynta mobilka ama suuq-geynta emailka, habka DIY ama shaqaaleynta shaqaaluhu waxay noqon kartaawaxaad raadineyso. Si kastaba ha noqotee, doorashada ma fududa. Iyadoo ku xiran isirrada sida miisaaniyadda / kharashyada, nooca ganacsiga ama helitaankaee xirfadlaha loo baahan yahay, mid ayaa laga yaabaa inuu awoodo inuu go'aamiyo habka ugu fiican ee looga fikiro. Hagahani wuxuu kaa caawin karaa inaad go'aamisohabka ugu wanaagsan ama isku darka si aad u gaarto yoolalka suuqgeynta internetka.